Four-wheel drive imoto - konke imigwaqo izwe evulekile
zonke izimoto sezwe Bengilokhu ukhangwa isithakazelo esikhethekile. Ngokulinganayo, ithinta umlando ngokubukeka kwabo, kudivayisi lobuchwepheshe, imiphumela yokuhlolwa futhi zonke izinhlobo imibuthano nge iqhaza zabo. Ikakhulukazi ngoba isibalo izimoto ukuthi ihlukaniswa njengoba "Jeep", okusho sezwe, sikhulela njalo. Ezimweni eziningi, maqondana izimoto onjalo sibe clichés osungulwe futhi izinkolelo, futhi musa sihambisane lesi sethulo avame ukuthi wonke-wheel drive imoto.
Kukholakala ukuthi lezi zimoto yethulwa ngo ibutho. Nokho, akusiyo kahle, noma kunalokho, hhayi njalo. Umjaho wokuqala kakhulu kwaba ezine-wheel drive imoto, ezakhiwe eduze nase-Amsterdam ngo-1903 ukuba azibandakanye rally Paris - Madrid. Ngokwemvelo, akazange acabangele konke isibe eminyakeni engamakhulu ezayo sivamile izimoto alesi sigaba (ukukhiya umehluko, elungile isisindo distribution, njll), kwakunzima ukuphatha futhi akuphephile sendleleni, akumangalisi omele lokuqala wonke-wheel drive izimoto.
imoto siqu ne drive enjalo unesithakazelo emnyangweni wezempi futhi okulandelayo entsha wonke-wheel drive izimoto eyenziwe imiyalo yabo. Kule ndaba, omunye abakhiqizi bodumo kwaba nkampani American "kaMomoni-Herrington", ezazidume ngokutshala kabusha kwakhono lika abavamile ezine-wheel drive iloli. Kwenziwa imizamo ukuze uthole izimoto off-road, futhi ngesicelo ezempi. Ziyakwazi e-United States ngaphambi kweMpi Yezwe II owawuse ithenda, futhi umphumela waba ukuthi kwakukhona serial-wheel drive imoto yokuqala, "Bantam BRC 40" prototype laziwe kabanzi ngokuthi "Willis".
Kusukela ngaleso sikhathi, i- isikhathi esidlule kwakukhona izinhlobo eziningi SUV, baba waziwa ngokuthi imishini enjalo, kodwa ezimweni eziningi zingabantu nje ngokungaqondile okuhlobene lezi jeeps. The version zakudala ye imoto okuqondene lesi sigaba:
owenziwa njalo wonke-wheel drive ;
Khiya-oluvala amasondo kanye umehluko cross-oluvala amasondo.
Sekuphele sesingochwepheshe ezingavamile. Yena salandelwa ezihlukahlukene ukuguqulwa kanye sekulingisa, kuhlanganise nokusetshenziswa electronics. A yi engokwemvelo lendlela umklamo wonke-wheel drive imoto kwaba nabaningi izimoto, imi ohlangothini komgwaqo kanye azikwazi ukuhamba ngoba umgwaqo cishe eziphukile, nakuba abhekwa off-road izimoto.
Kuyaphawuleka ukuthi ngempela ezine-wheel drive izimoto zidinga eqondile kakhulu, singasho ukulawula ubucwebe, ikakhulukazi uma cornering nalapho enza zijike ngokushesha. Lokhu kungenxa yokuthi le moto singaziphatha ngokungathi drive phambili sondo, ne understeer yakhe evamile futhi idrayivu ezingemuva-wheel, nge oversteer lapho wenza zijike ngokushesha. Ezimweni eziningi, lokhu kungenzeka kwi omazombezombe ngesivinini, okuyinto kubangelwa ukuklanywa AWD, ngakhoke ukulawula imoto enjalo idinga ukuqeqeshwa okusezingeni eliphezulu umshayeli.
Ukubuyela umlando mashi ngokunqoba wonke amasondo izimoto emhlabeni wonke, kuyafaneleka Qaphela ukuthi eU.SSR efanayo wonke-wheel drive Gaz-64 uvele 1941 futhi lifana ncamashi "nomnsalo 'abadumile -" Bantam BRC 40 ", nakuba abaklami zilungiselelwe nenguqulo yayo izimoto off-road. Nokho, zonke lezi okuhlukile wonke amasondo imoto isetshenziswa esikhathini esizayo, njengoba esigabeni sokuqala abaholi bezwe ukuthi udinge ukuphinda "Bantam BRC 40" futhi uqale ukukhiqizwa yayo mass.
Four-wheel drive imoto njengoba omunye ethandwa kakhulu futhi likufuna izinhlobo zezimoto iyingxenye ebalulekile yemikhumbi etholakalayo yalezi zimoto, futhi inani labo elikhula njalo. Izinzuzo imoto enjalo, kanye namathuba atholakalayo kumnikazi wayo, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka nezindleko, kanye kwaba lokungahlaliseki ohlangene nokuqhutshwa wemoto.
Alamu Starline A91 Ingxoxo: ukubuyekezwa, izincazelo
Antikoroziyka izimoto: Yikuphi okungcono, ikakhulukazi kukhethwa izinhlobo, izicelo kanye nokubuyekeza
I-carburetor injini: imishini nezici
Ungaqali Vaz-2115: Izimbangela Okungenzeka kanye Solutions
Schauberger injini - Yinganekwane Noma Yiqiniso?
DVR esibukweni esimenza abone into engemuva: ukubuyekezwa. Car DVR Mirror: Ukubuyekeza ukuhlolwa
Kungenzeka yini ukuba uthele isisekelo ngo-Okthoba, noma kusuke kukufanelekele ukulinda?
Indlela ukuhlanza ubuso bakho ekhaya ngemizuzu embalwa nje
Rzhevskij Forest Park. Rzhevskij ihlathi epaki Vsevolozhsk wesifunda (Saint-Petersburg): Izibuyekezo
Recipe garlic ubhontshisi wonke umndeni
Ukuphathwa ngempumelelo prostatitis amakhambi abantu
Art. 214 we-Code Criminal. Ukuchithwa kwempahla: ukwakheka kobugebengu, ukujeziswa, ukuhlaziya
Transgender - kuyini? Transgender - ngubani? ubunikazi bobulili
Krakow, Poland. Izikhangibavakashi nezithombe zezivakashi
Camping "Sokolniki" (eMoscow): izithombe kanye nokubuyekeza
Intuthu generator ukuze disco